Abanikazi bemilenze efanelekileyo kakhulu e-Hollywood
Makhe sibuze umbuzo othi: "Yintoni abafana nabaninzi kwizesondo ezifanelekileyo?". Amehlo, utsho. Ewe, asinakuphikisana, kodwa kukho enye into yokuba isini esomeleleyo asikwazi ukumelana. Le mihle imilenze yamantombazana enhle, ehlelwe kakuhle. Kodwa ukuzisola okukhulu, akusiyo yonke into efanelekileyo yokuziphatha ngesondo inokuziqhayisa ngokuba nemilenze efanelekileyo kakhulu, njengoko ithi "ezivela ezindlebeni." Kuyafana nakwi-Hollywood divas ezidumileyo. Yintoni ongayenza, kungekhona yonke imvelo kamama enikwe imilenze enhle neyincinci, kwaye ngubani oye wanikela, ngoko ke nakuzo zonke "amakhadi ezandleni". Kwakunjalo ngokugqithiseleyo ukuba sigqibe ukuthetha namhlanje. Ngoko, masizame ukufumanisa ukuba ngubani na ohloniphekileyo onokuqhayisa imilenze emihle kwihlabathi lonke.
Unqwenela ukubheka izinto ezimangalisayo - bonisa wonke umntu imilenze yakho, - eli binzana liyi-credo ephambili yeenkwenkwezi ezininzi zehlabathi. Imilenze efanelekileyo ye-Hollywood divas iyakwazi ukuthabatha intliziyo yomntu omnye, kwaye oku akuthethi ngokubonakala. Amadoda aphelelwa yilapho alahlekelwa yingqiqo ngenxa yezobuhle, abamba ukuhamba kwabo ezindleleni ezibomvu kunye ne-scaffold yaseHollywood. Ngoko, uluhlu lwethu lunalo:
Phantse zonke iinkwenkwezi zaseHollywood zinokuziqhayisa ngeyona nto. Umzekelo, uJennifer Lopez unesilwane elihle, u-Angelina Jolie - imilomo emnandi kakhulu, uKim Kardashian - isifuba esinobugqibeleleyo, kunye noMeganFox - amehlo amahle kwaye akalibalekiyo. Kodwa ubuhle uJulia Roberts unokuziqhayisa ngemilenze yayo enhle kwaye enhle. NguRoberts esibeka phambili kwindawo yethu. Ngubani wethu ongayiqondi uJulia kwenye yeemboniso ze-movie "Owesifazane Ohlekileyo", apho umdlali owenza umxhwele unxibelele kwindawo yokuhlambela kunye nemilenze enobudlova yeqabane lakhe kwifilimu kunye nomfana omhle uRichard Gere. Apha akukho mntu uya kuthi uMama Wathukuthela uJulia Roberts, wamvuza ngemilenze ye-chic. Yingakho abafoto bezithombe abadumileyo banomdla kakhulu wokusebenza njenge-saxter. Emva kwakho konke, kwiifotshane kunye nezicathulo eziphezulu, kwiifoto, abadlali abalingani abalingani. Ngokukodwa oku kusebenza kwiifoto kwibala lolwandle, apho ininzi imilenze ibonakala eRoberts.
Umdlali ongumdlali waseLatin waseMelika, oyinkwenkwezi eyaziwayo yaseHollywood ebonakalayo, uSalma Hayek uyaziqhenya ngemilenze yakhe engayibalekiyo. Umdlali we-actrice unembonakalo engavamile kakhulu: amehlo omdaka, ubunwele obumnyama obude kunye nemilenze emihle efanelwe ulwandle. Kwaye ungathethi malunga nokuhamba kwe-Salma, ngoko ungatsho i-nitschegovans. Iimpawu ezininzi zehlabathi zifuna ukuhamba ngokulula nokuhamba kakuhle, njengomdlali we-actress. Kodwa akayi kumnika iimfihlelo, aqhubekeki nje ngephepha elibomvu laseHollywood, kodwa neentliziyo zabantu.
Imilenze emnandi neyentandokazi "ivela ezindlebeni" - yiyona "yehashe" ephambili, leyo, ngaphezu kwendlela ebumnandi ngayo, inokuqhayisa ngesibindi umdlali odlawayo uCameron Diaz. Iinyawo zikaCameron kwiifoto zikhangeleka kakhulu kunama-photohotel. Ukuthetha ngokumangalisa ngemilenze yomdlali weqhinga waba ngumsebenzi wakhe kwiphephancwadi enegama elithi "Izingelosi zikaCharlie." Kwakule filimu uDiaz wazibonakalisa "ukukhula ngokugcwele", ukunika abantu abamangalisayo ukuba banandiphe ukujonga imilenze yakhe yemilenze. Ngoko imilenze kaCameron Diaz ifanelwe udumo oluphezulu.
Ubuhle u-Angelina Jolie unamaxesha angaphezu kwesinye ahlala kwindawo ehloniphekileyo kakhulu kwiindawo zeentlobo ezibalaseleyo kwihlabathi. Kwaye kutshanje, uJolie wayesezona zilishumi ezona ziphezulu "imilenze e-sexy yaseHollywood." Kungenxa yesi sizathu sokuba asinakunceda ukuthetha amagama ambalwa malunga nemilenze yakhe emihle, apho kungabikho namnye umntu onganamdla. Kule filimu "Mnu noNksk Smith" ihlabathi lonke liqalise ukuthetha ngento enhle neyongqambileyo, ukuqonda ngokupheleleyo ilizwi, imilenze yomdlali we-actress. Yintoni ekuthethayo, sifuna ukuba uAngelina ahlale ehle kwaye enobucayi.
Ummeli we-Etiominozhki u-Uma Thurmaye waqhekeza iintliziyo ezininzi zabalandeli bakhe. Imilenze yakhe yayingabizwa ngokuba yinto enhle kunazo zonke eHollywood. Akumangalisi ukuba ezininzi iincwadi ezikhethiweyo ezibizwa nge-actress "i-Amazon entsha". Umfanekiselo ofanelekileyo, umlenze omdala-oko, ukubonakalisa ubuhle kunye nemeko. Yiyo le mpawu uThixo ayinike uThixo kumdlali we-actress.
Umlingisi uNicole Kidman uye waqaphela iminyaka emininzi njengobunjani bobuhle besifazana, ubuhle, isitalelo kunye nesinambitheko esihle. Ngaphezu koko, uNicole ungumnikazi omangalisayo wemilenze emihle kunye ne-gait ephazamisayo. UNicole ugxininisa kakuhle imilenze yakhe eneempahla ezikhawulezileyo kunye nobude beengubo eziya emadolweni, oko kufezekisa ngokucacileyo inani lakhe elincinane.
Yaziwa kuthi sonke ngendima kaRachel Greene kwiichungechunge ezidumileyo kunye ezidumile ze-TV "Abahlobo" uJennifer Aniston banokuziqhayisa ngokusemgangathweni nomfanekiso omhle wamabhinqa ukuba umdlali we-actress angakwazi ukuhlala egxininisa kwaye agxininise ngempahla yakhe kunye nezicathulo zefashini.
Enye inkwenkwezi yaseHollywood yaseColombia i-Carmen Electra ayikho nje into engavamile kwaye ayikhunjulwayo, kodwa nayo imilenze efanelekileyo, ifanelekile kwaye ifom. Imilenze yakhe ende neyindayo yinto yamaphupha angabikho abantu abalishumi elinanye, kwaye amandla okuzibonakalisa kuyo yonke ubuhle imihla ngemihla inomtsalane kumdlali wezobugcisa.
Kuze kubedala, uJessica Alba wabizwa ngokuba ngumnye wabadlali bezona ziqingqiweyo zeeplanethi. Ngokuqinisekileyo, ngoku akunakuphikisana, kuba kunye nokukhula okuqhelekileyo-169 cm, umdlali we-actress akagcini nje ngokulinganisela, kodwa kunye nemilenze emnandi. Ukuba ngumama, umdlali wecala ngokukhethekileyo waqala ukulandela umzobo wakhe. Yaye ukuxhasa i-krasotunog yokunceda kwayo. Nsuku zonke, umdlali we-actress wenza i-elliptical exercisereadreader, wenza ama-50 angama-sit-ups kwaye wenza umzimba wonke wokuzivocavoca. Ngendlela, njengoko uJessica ngokwakhe avumile, akakwazi ukucingela ubomi bakhe ngaphandle kokuhamba.
U-Eva ubhekisela kwinani labadlali abancinane kunazo zonke e-Hollywood - ubude bayo buyi-157 cm. Kodwa nangona kunjalo, i-Lengoria yenye yezona zizobuhle zentandokazi kwaye inemilenze emihle kakhulu phakathi kweenkwenkwezi. UEva uhlala ekhuthaza ukugqoka izithende. Ngokutsho kwamatyala, akayi kubakhupha ekhaya, kuba banceda ukugcina isigodlo sasebukhosini, kwaye imilenze yenziwe yincinci.
U-Shakira ungomnye wemilenze emihle kakhulu phakathi kobuhle be-Hollywood. Kulo naluphi na iingubo ezintle umdlali we-actress akabonakalwanga kuluntu, imilenze yakhe eqaqambileyo ihlala iphawulwa. Ngomlenze wakhe omnene kunye nomnandiphe, umdlali we-actress akayikubonga nje kuphela kwimvelo, kodwa kunye nokufunda kwakhe kwiklasi ye-ballet. Ngenxa yokunyaniseka kwakhe, sele sele sele eneminyaka eyi-16, i-Theron iphumelele umncintiswano wamanqaku.
Imilenze yolu dume oludumiweyo olupapashwe ngokugqithiseleyo ludla ngokuba ludumo oluhle kakhulu kwaye lincinci kwihlabathi lonke.
UVaughn, uluhlu, abanikazi abafumana i-Hollywood ibhaso elihloniphekileyo kwiindawo ezintle zomzimba, oko kukuthi imilenze emihle!
Ugqirha uGeorgy Vitsin, i-biography
UBrad Pitt: omhle kwaye ekhulile
I-cottage cheese eyakhelwe ngaphakathi
Iingxowa zeTokotleji ngokucwenga
Omelette kunye nobisi
Ukukhupha kwiklabishi encinane
Shish kebab kusuka kwingulube ehovini
Imbali yembali: ukusabela okuthe tye